नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कलाकार भन्दैमा जे पनि गर्न छुट छ र ??
कलाकार भन्दैमा जे पनि गर्न छुट छ र ??
- के हामी कलाकारहरूले पनिअनुशासनमा बस्नु पर्दैन र ?
- सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य मान्यता, समाजका परम्परा, अनुशासन, रिती रिवाज माथि खेलवाड गर्न पाइन्छ र ?
- छाडा, फोहोरी, विकृति, बिसँगतियुक्त गीत सङ्गीत, कला, संस्कृति भित्र्याउन पाइन्छ र ?
अहँ यो हुनै सक्दैन । म आफै पनि एउटा कलाकार हुँ तसर्थ म भन्दैछु - म हुँ या दुर्गेश हुन वा Vten हुन वा अरू जो कोही हुन, नियम कानुन र मर्यादाको परिधि भित्र रहनै पर्छ । जसले विकृति भित्र्याउन खोज्छ त्यस्तालाई पाता कस्नै पर्छ । म प्रहरी प्रशासनको यो कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्दछु ।
बरु प्रहरी प्रशासनले एकादुइ लाई मात्र होइन विकृति विसङ्गति ल्याउने, जे मन लाग्यो त्यसैलाई कलाको आवरणमा भाइरल हुनका लागि गीत सङ्गीत, कला, संस्कृति माथि बलात्कार गर्ने अरू फोहोरीहरूलाई पनि छिट्टै पाता कँसोस ।
*के लोकतन्त्र, स्वतन्त्रताको अर्थ जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो र ??
दर्शक श्रोताहरूले पनि कथित कलाकारिताको आडमा संस्कृति माथि बलात्कार गर्ने ती जो सुकै हुन तिनलाई बहिष्कार गरेर सभ्य, सुसंस्कृत गीत सङ्गीत, कलाका लागि न्याय गर्नु पर्ने होइन र ?
प्रहरी धेरै कुरामा चुकेको छ, गल्ती गरेको छ म मान्छु तर यो कुरामा प्रहरीको एक्सन प्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ । बिरोध गर्ने महानुभाबहरुलाई एउटा सुझाब - कृपया यिनका गीत, कला तपाईं आफ्ना आमा बाबु, छोरा छोरी परिवारजनसँग संगै बसेर हेर्न, सुन्न मात्र सक्नुस् म तपाईंहरुका जुनसुकै शर्त मान्न तयार छु ।
सबैलाई तिहारको शुभकामना ।
परिवार सँग संगै बसेर आउनुस देउँसी भैलो हेरौं सुनौं यो लिँक http://www.nepalmother.com/2019/10/blog-post_80.html मा क्लिक गरेर । -
Posted by www.Nepalmother.com at 12:25 PM